တောင်ကုတ်မှာ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရသော မြန်မာပြည်သား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ရှဟ်ဒီ (၁၀) ဦးနှင့် အဖိနှိပ်ခံ ဗမာပြည် မွတ်စလင်များရဲ့ ဘ၀ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« If two top Muslim leaders in the Commission, U Tin Mg Than and U Nyunt Mg Shein are truly arrested UN and OIC must act quickly to save them from Genocide Murders silencing them permanently
Iman in Than Twe Arrested, Arakan Commission Member Expelled »
အမည် – ကိုတင်မောင်ထွေး /ရှုအိုင်ဗ်ဘိုင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၈/တတက (နိုင်) ၂၁၁၀၈၄ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၆ . ၉ . ၁၉၉၁ အသက် – ၂၁ နှစ် မိဘများ – ဦးမော်စီ + ဒေါ်မွတ်နီး ။ မွေးချင်း ၇ ယောက်အနက် ၆ ယောက်မြောက်သား ဖြစ်သည်၊ ပညာအရည်အချင်း- အဌမတန်း အလုပ်အကိုင် – ‘ ရှမ်းကုန် ‘ (သစ်သီးဝလံ) ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ကိုင်သည်။ နေရပ် – အုန်းတော (၁) ရပ်ကွက်၊အပိုင်း (၄) ၊ အုန်းတော (၁) လမ်း ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊မကွေးတိုင်း။ ရှုအိုင်ဗ်ဘိုင်သည် မိဘများနှင့်အတူ နေထိုင်ပြီး လူလွတ် ဖြစ်သည်၊ မိဘများနှင့် အတူ သစ်သီးဝလံ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ကိုင်သည်၊ ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ရသူများထဲတွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်၊
– ကိုအောင်ဘိုဘိုကျော် ၂၆ နှစ် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၄/မမန (နိုင်) ၂၇၇၆၉၅ အဖအမည် – ဦးထွန်းထွန်းဇော်
– ကိုဇော်ညီညီထွဋ် ၃၃ နှစ် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၄/မမန (နိုင်) ၁၄၈၁၃၃ အဖအမည် – ဦးအီဗရာဟင်
– ဦးအောင်ဇော်ဝင်း / ကိုမောင်မောင် ၄၅ နှစ်
– ဦးညီညီထွန်း ၄၂ နှစ်
This entry was posted on November 2, 2012 at 2:16 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.